Ụbọchị: 5 October 2019
TCDD Taşımacılık A.Ş. Nleta Congratulatory na Onye isi njikwa
Kenan Çalışkan, Onye isi oche nke Transportgbọ njem na ndị isi oche İbrahim Uslu, Mehmet Yıldırım na Atilla Demirtunç, TCDD Taşımacılık A.Ş. Onye njikwa ọhụụ bụ Kamuran Yazıcı kelere ọbịbịa ahụ. Onyinye nyere General Manager Kamuran Yazıcı n'oge nleta ahụ [More ...]
“6. Eker M Gbaa oso ”. Bursa Police Department kwuru na nkwupụta, "Athletics Federation of Turkey akụkọ ihe mere eme na TAFE 01.03.2019 / 1922 ike agukọta isiokwu na Bursa Provincial Directorate of Youth na Sport-ebute site ná" 6. Ika [More ...]
Hüseyin Keskin, onye isi njikwa nke ọdụ ụgbọ elu steeti (DHMİ) na Onye isi oche nke ndị isi oche, bụ ndị mere ule na ọdụ ụgbọ elu Atlanta, mere nyocha site na akaụntụ mgbasa ozi na-elekọta mmadụ banyere nleta ahụ. Keskin, “Ugboro-atọ n'okporo ụzọ awara awara na mpụga United States ke akpa ini ke ererimbot [More ...]
Diyarbakır Metropolitan Municipality, Bismil district, ụmụ amaala nke nnwere onwe na-eji ụgbọ njem ọha na eze nke 2 kwa ụbọchị n'etiti oge ọrụ 07.00 na 17.30 nke ọrụ ụlọ ọgwụ na-aga n'ihu. Diyarbakir Isi Obodo, Bismil na-akwụghị ụmụ amaala nọ na mpaghara n'efu [More ...]
A na-enyere ụmụ akwụkwọ dị obere na Ankara Nkwado ụgbọ njem
Onye isi obodo nke Ankara Obodo Obodo Mansur Yavaş na-emezu nkwa ya o kwere ụmụ akwụkwọ na-amụ isi obodo site na ego mmiri na-ebu ụzọ otu. Mayor Yavaş kọwara na enyemaka ndị ezinụlọ na-enweghị ego ga-aga n'ihu [More ...]
Onye isi ala Seçer na-enyocha nyocha na Taşucu Port
Mersin Metropolitan Municipality Mayor Vahap oke, Metropolitan Municipality, Turkey nanị iche nke ịbụ o sie na na municipalities nwere ikike iji rụọ ọrụ n'ọdụ ụgbọ mmiri maka mba na nchoputa na Taşucu Harbor. Recenata ozi n’aka ndị ọrụ ikike n’ọdụ ụgbọ mmiri ebe a na-ebufe ụgbọ mmiri na ebu ndị njem [More ...]
xnumx'inci Science Ememme na Konya, Turkey mbụ sayensị center malitere na TUBITAK-aided Konya Science Center. KONYA, AK CKỌ SITE N’IBỌCH P N’ THEBỌCH AND NA TAA Uğur İbrahim Altay, onye isi obodo nke Konya Metropolitan, kwuru okwu mmeghe siri ike na mmeghe nke mmemme ahụ. [More ...]
'Locomotive na Wagon Sector Business Forum' gbara aka na Thrace
N'okpuru nhazi nke klọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọde na Trakya na Tekirda ğlọ ọrụ aka na teknụzụ, Çorlu na Çerkezköy Na nkwado nke oflọ na Azụmaahịa na Industrylọ ọrụ, ụlọ ọrụ mba na-emepụta ụgbọ ala na ndị na-enwe ụgbọ ala nwere ohere iduzi ụlọ ọrụ azụmahịa na ụlọ ọrụ dị na mpaghara anyị. [More ...]
Onye isi obodo İmamoğlu: 'Haydarpaşa na Sirkeci Stations nke Ndị Bi na Istanbul'
Onye isi oche İBB Ekrem İmamoğlu gara na Ngalaba acgba Anụmanụ na Ọgwụ na Fatih dịka akụkụ nke NUMbọchị Nchedo Anụmanụ nke ụwa nke 4. Imamoglu, nke nọ n'ihu igwefoto ahụ, zara ajụjụ site n'aka ndị nta akụkọ banyere okwu a. Imamoglu, Haydarpasa na Sirkeci [More ...]
Companieslọ ọrụ mba dị iche iche na-emepụta ụgbọ ala na obere ụgbọ ala gbakọtara na nnọkọ azụmahịa na Thrace. Mgbe ihe ngosi nke ndị nnọchi anya ụlọ ọrụ ahụ gosipụtara, a tụlere isi okwu nke mpaghara ahụ na ebumnuche ndị ọzọ na nnọkọ abụọ ahụ. Okpukpo nke Omot nke na-achikota ndi nnochite anya mpaghara [More ...]
Plasticzmir plastic na-ewere nzọụkwụ nke mbụ iji belata ahihia
World setịpụrụ ịdọrọ uche gaa plastic mmetọ na Mediterranean Nature Conservation Foundation (WWF) Blue panda ụgbọ mmiri akwụsịtụ na Izmir Turkey ke kpuchie nke ihe. N'ọnọdụ a, ikere òkè na “Networks Na-enwe Ihe Okike Na-adịghị Ala Afọ N'etiti arasında n'etiti İzmir Metropolitan Obodo na WWF [More ...]
Site na nkwado nke Kayseri Obodo ukwu na Ọchịchị Na-ahụ Maka Nkụzi nke Ọha, a na-emejupụta Mgbakọ Mathematics na Durak na Kayseri. Na mmekorita ya na ndi isi obodo ukwu na ndi isi okacha nke izizi nke obodo, emejuputara ihe omimi Matuta na Durak na Kayseri. Studentsmụ akwụkwọ na ndị okenye nọ na bọs [More ...]
Taa na History 5 October Na 1869 Porte nwere nkwekọrịta pụrụ iche na Hirsch, na-ekwenye na 10 nde francs nke 65 mere iji kwụọ ụgwọ kwa afọ. 5 October 1908 Bulgaria kwupụtara nnwere onwe ya. 19 April 1909 [More ...]
Akwụkwọ akụkọ Họrọ ọnwa October 2019 (368) September 2019 (555) August 2019 (508) July 2019 (633) June 2019 (504) Mee 2019 (526) April 2019 (418) March 2019 (521) February 2019 (483) January 2019 (502) Ogwe 2018 (620) November 2018 (504) October 2018 (435) September 2018 (517) August 2018 (486) July 2018 (506) June 2018 (581) Mee 2018 (467) April 2018 (545) March 2018 (554) February 2018 (500) January 2018 (557) Ogwe 2017 (509) November 2017 (427) October 2017 (538) September 2017 (455) August 2017 (505) July 2017 (479) June 2017 (477) Mee 2017 (493) April 2017 (434) March 2017 (540) February 2017 (477) January 2017 (538) Ogwe 2016 (487) November 2016 (631) October 2016 (657) September 2016 (542) August 2016 (608) July 2016 (485) June 2016 (661) Mee 2016 (664) April 2016 (700) March 2016 (804) February 2016 (855) January 2016 (751) Ogwe 2015 (799) November 2015 (640) October 2015 (624) September 2015 (428) August 2015 (493) July 2015 (505) June 2015 (535) Mee 2015 (577) April 2015 (622) March 2015 (1017) February 2015 (878) January 2015 (1077) Ogwe 2014 (963) November 2014 (826) October 2014 (771) September 2014 (598) August 2014 (808) July 2014 (911) June 2014 (735) Mee 2014 (957) April 2014 (972) March 2014 (864) February 2014 (720) January 2014 (733) Ogwe 2013 (664) November 2013 (656) October 2013 (548) September 2013 (570) August 2013 (533) July 2013 (661) June 2013 (577) Mee 2013 (734) April 2013 (1059) March 2013 (1102) February 2013 (811) January 2013 (906) Ogwe 2012 (911) November 2012 (1168) October 2012 (830) September 2012 (886) August 2012 (974) July 2012 (863) June 2012 (591) Mee 2012 (445) April 2012 (563) March 2012 (699) February 2012 (546) January 2012 (417) Ogwe 2011 (149) November 2011 (35) October 2011 (23) September 2011 (18) August 2011 (25) July 2011 (18) June 2011 (16) Mee 2011 (13) April 2011 (13) March 2011 (33) February 2011 (24) January 2011 (13) Ogwe 2010 (335) November 2010 (12) October 2010 (15) September 2010 (12) August 2010 (16) July 2010 (9) June 2010 (19) Mee 2010 (6) April 2010 (3) March 2010 (62) February 2010 (303) January 2010 (1838) Ogwe 2009 (4) November 2009 (1) October 2009 (3) September 2009 (3) August 2009 (2) June 2009 (3) Mee 2009 (2) April 2009 (3) March 2009 (9) February 2009 (4) January 2009 (3) November 2008 (1) October 2008 (1) September 2008 (2) August 2008 (1) July 2008 (2) June 2008 (2) Mee 2008 (2) April 2008 (1) March 2008 (3) February 2008 (5) January 2008 (2) Ogwe 2007 (2) October 2007 (2) July 2007 (1) Mee 2007 (1) April 2007 (1) February 2007 (2) January 2007 (1) Ogwe 2006 (1) October 2006 (3) August 2006 (1) June 2006 (2) Mee 2006 (2) April 2006 (2) March 2006 (2) November 2005 (2) August 2005 (1) June 2005 (1) March 2005 (2) February 2005 (1) January 2005 (1) Ogwe 2004 (1) October 2004 (3) July 2004 (1) Mee 2004 (2) Ogwe 2003 (1) October 2003 (1) Mee 2003 (1) March 2003 (1) February 2003 (1) January 2003 (1) Ogwe 2002 (1) October 2002 (4) August 2002 (1) April 2002 (1) March 2002 (2) January 2002 (2) July 2001 (1) June 2001 (1) March 2001 (1) Mee 2000 (3) March 1999 (1) October 1998 (2) March 1998 (1) August 1997 (1) October 1996 (1) August 1996 (2) Mee 1995 (1) August 1992 (1) Mee 1990 (1)
Na-eme ka okporo ụzọ na-eme ka ị na-aga oge